Ny faritra Azia Pasifika dia mahita fisondrotana eo amin'ny toerana misy toerana voatokana ao amin'ny WTM London
Home » Travel Associations News » Ny faritra Azia Pasifika dia mahita fisondrotana eo amin'ny toerana misy toerana voatokana ao amin'ny WTM London
Ireo fampirantiana avy amin'ny faritra Azia Pasifika dia nampitombo be ny haben'ny fijoroan'izy ireo tamin'ny WTM London tamin'ity taona ity - hetsika lehibe manerantany ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany.
WTM London dia mitatitra ihany koa ny fahalianan'ny mpitsidika izay maniry hahafantatra momba ny tambajotram-pifandraisana sy manao orinasa miaraka amin'ny orinasa avy amin'ny faritra mandritra ny WTM London.
Ny fitomboana dia hita manerana ny solaitrabe, manomboka amin'ny tsena matotra ao Japana, Korea ary Aostralia ho any amin'ny toerana misongadina toa an'i Kyrgyzstan, Taiwan, Mongolia ary i Vietnam.
Toerana iray andrasana hahita fisondrotana isa ny mpitsidika dia Japana, izay miomana handray ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny rugby amin'ny taona 2019 sy ny Lalao Olaimpika amin'ny taona 2020.
The Fikambanan'ny fizahantany nasionaly japoney dia nanitatra ny toeran'ny fampirantiany WTM London mihoatra ny ampahatelony ho an'ny 2017, satria manatsara ny hetsika marketing mialoha ny fifaninanana ara-panatanjahantena iraisam-pirenena.
Tamin'ny taon-dasa, ny JNTO dia nanokatra birao vaovao any Madrid, Roma, Moskoa, Delhi, Hanoi, Manila ary Kuala Lumpur satria mitrandraka ny lazany mitombo eo amin'ny tsena halavirana lava sy amin'ireo firenena Azia mpifanolo-bodirindrina aminy.
Ny renivohitry ny firenena dia vao notendrena ho anisan'ny toerana fialantsasatra fialan-tsasatra folo tsara indrindra ho an'ny 2017, araka ny Tatitry ny vola fialan-tsasatry ny paositra any UK.
Ny barometatra dia anjakan'ny toerana malaza eropeana saingy TokyoNy laharam-pahamehana tamin'ny laharana valo tamin'ity taona ity dia ity no hany naleha lavitra tao amin'ny lisitry ny tanàna tsara indrindra.
Mahita trano fandraisam-bahiny sy fandraisam-bahiny marobe ny firenena - ohatra, Japon Legoland nosokafana tamin'ny aprily 2017, ary a Moomin valan-javaboary lohahevitra dia efa hisokatra amin'ny taona 2019 - ary fiaran-dalamby fizahan-tany roa vaovao no nanomboka nihazakazaka tamin'ny lohataona 2017.
Ankoatra izany, Finnair hampitombo ny sidina entin'i Tokyo amin'ny fahavaratra 2017, ary Japana Airlines (JAL) dia hanangana serivisy mivantana mivantana eo anelanelan'i Londres sy Tokyo manomboka amin'ny Oktobra 2017.
Mandritra izany, ny Fikambanana fizahan-tany any Korea dia maka toerana 20% bebe kokoa hanambarana ny Lalao Olaimpika amin'ny ririnina 2018 any Korea Gangwondo faritra.
Tamin'ny WTM London tamin'ny taon-dasa, ny birao nasionalista mpizahatany dia nampiroborobo ny Lalao Olaimpika amin'ny ririnina miaraka amina hetsika toy ny milina ski-jump jump virtoaly eo amin'ny toerany, ary nanasongadina be ny lalao erak'ireo tsena lehibe izy nandritra ny taona 2017.
Ankoatra ny Lalao Olaimpika dia hampiroborobo ny KTO ny kolontsaina 'Hallyu' ankehitriny, izay manarona mozika, lamaody ary tantara an-tsehatra - ary serivisy fiaran-dalamby haingam-pandeha haingam-pandeha.
Fizahan-tany Aostralia dia nanitatra ny toerany tamin'ny 17% isan-taona, satria mitrandraka ny fitomboana lehibe amin'ny tsena lehibe toa an'i Etazonia, UK ary Azia.
Ny sehatry ny fizahan-tany miditra dia miaina fitomboan'ny isan'ny mpitsidika iraisam-pirenena sy ny tanàna toaSydney mahita famatsiam-bola tsy mbola nisy toa azy teo amin'ny sehatry ny hôtely.
Etsy ankilany, tsena marobe misondrotra any Azia Pasifika no manararaotra ny fahafaha-manao azy ary maka toerana lehibe kokoa hitrandrahana fironana fitomboana.
· Kyrgyzstan any afovoan'i Azia dia avo telo heny noho ny habeny, satria mitrandraka ny fahalianan'ny Silk Road - tambajotram-pifandraisana taloha iray izay nampifandray ny Atsinanana sy Andrefana nandritra ny taonjato maro.
Izy io dia ao amin'ny vondrona Làlan'ny Làlan'ny Lasoà, izay misy Ozbekistan, Turkménistan aryArmenia.
· Ny Birao fizahantany any Taiwan nampitombo ny 42% ny fijoroany amin'ity taona ity, satria mampiroborobo ny hafany amin'ny varotra: 'The Heart of Asia'.
Ary koa ny tanàna mavitrika sy ny fahitana voajanahary manaitra, ny firenena dia manasongadina ihany koa ny fialantsasatra amin'ny bisikileta, ny fitsangatsanganana an-tsehatra, ny lova manintona ary ny sakafony
Vao haingana ny firenena no voalohany tao Azia nanaiky ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy - koa mivarotra amin'ny tsenan'ny LGBT ihany koa izy izao.
· Ny fijoroana ho an'ny Fikambanan'ny fizahantany Mongoliana 20% lehibe kokoa amin'ity taona ity, satria ny fizahan-tany dia mijery fizahan-tany hanampiana amin'ny fampivoarana ny harinkarena.
Izy io dia mivelatra amin'ny sehatra maro, manomboka amin'ny hetsika sy fitsangatsanganana an-tsokosoko mankany amin'ny fizahan-tany ara-kolontsaina sy ara-tontolo iainana, miaraka amin'ny toerana tsy manam-paharoa toa ny Tany Efitr'i Gobi sy ny renivohitra, Ulaanbaatar.
· Vietnam, ny Ny birao nasionaly momba ny fizahantany dia mijoro izay avo roa heny sy sasany mahery noho ny tamin'ny taon-dasa, misaotra ireo mpiara-miombon'antoka izay maniry fatratra ny hanararaotra ny fotoana mety ao amin'ny WTM London.
Ary koa ny Fitantanana ny fizahantany any Vietnam, ireo mpitsidika ny fijoroan'i Vietnam dia afaka mihaona amin'ny solontenan'ny mpitondram-pirenena, i Vietnam Airlines; ny birao fizahan-tany eto an-drenivohitra, ny Maso ivoho fampiroboroboana Hanoi; sy ny firenena Birao Mpanolo-tsaina ny fizahan-tany (TAB) - fanangonana mpandray anjara amin'ny indostria, ao anatin'izany ireo mpandraharaha fizahan-tany lehibe sy marika amin'ny hotely sy hotely.
Ankoatr'izay, ny WTM London dia nahita fitomboan'ny isan'ny mpitsidika liana amin'ny faritra Azia Pasifika tamin'ny 8,800 2015 tamin'ny 9,400 ka hatramin'ny 2016 XNUMX tamin'ny XNUMX.
World Travel Market London, talen'ny Senior, Simon Press dia nilaza fa: “Mahavariana ny mahita faingana ny fampiroboroboan'ny mpampiranty ao amin'ny faritr'i Asia Pacific ny toerana misy azy ireo ao amin'ny WTM London.
"Taratry ny fitomboan'ny fitomboana any amin'ny faritra an'izao tontolo izao ity sy ny fomba faneken'ny varotra dia fa WTM London dia sehatra tsy manam-paharoa hitarika orinasa sy hampiroborobo ny fahatsiarovan-tena."
Nanampy izy hoe: "Nandritra izay roa taona lasa izay dia nahita fiakaran'ny isan'ny mpitsidika milaza izy ireo fa te-hanao raharaham-barotra miaraka aminy, na hahalala bebe kokoa momba ireo mpampiranty an'i Asia Pasifika - nitombo 6% ny isa teo anelanelan'ny 2015 sy 2016, ary antenainay fa hitombo ny tahan'ny fitomboana amin'ity taona ity. "
Tetikasan'ny ankizy Elephant Hills: Tetikasa vaovao
Ireo mpiantsehatra UNWTO tsy fantatra anarana dia miantso ny fikambanana fizahan-tany ho harafesina ao anatiny